TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Feb 21, 2003
Barnaamujka Caawa Radio Xoriya ka baxaya waxuu ka kooban yahay qodobadan hoose.
Ø Dad laga qabqabtay Magaalada hargaysa oo u dhashay Ogaadenya.
Ø Dagaalo dhex maray Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya.
Ø Kumanaankun oo ka tirsan Shaqaalaha Maamulka Adis Ababa oo Shaqada laga fadhiisin doono.
Ø Arday Oromo ah oo laga raafay Dugsiyadoodii si loogu daro Ciidamada Itoobiya.
Ø Jabuuti iyo Maraykanka oo Heshiis kala sixiixday.
Ø Madaxwaynaha Eritrea oo u anbabaxay Wadanka Faransiiska.
Ø Suugan iyo qodobo kale oo badan.
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Hargaysa ayaa sheegaya Dad Ganacsato ah oo u dhashay Ogaadeenya oo uu maamaulka magaalada Hargaysa Qabqabtay si uu gacanta ugu galiyo Xukuumada Dhiigaycabka ah ee Itoobiya.
Qaqbashada Dadkan ayaa waxay ka danbeeysay Booqasho ay ku yimaadeen Wafti ka socda Wasaarada Gaashaandhiga Itoobiya 17.02.2003 Magaalooyinka Hargaysa iyo Barbara. Waftigan oo uu hogaaminayay ninka madaxda ka ah Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee Ogaadeenya ku sugan Korneel Alamanyo Bariire ayaa Maamulka Waqooyi galbeed u dhiibay Liis ay ku amrayaan in ay soo qabqabtan Dad ay baadi goobayaan. Dadkaas ayaa la sheegayaa in ay ka mid ahaayeen qaar u dhashay Ogaadeenya iyo qaar ka mid ahaa Ciidamada Itoobiya oo soo baxsaday. si kastaba ha ahaatee maamulka Waqooyi Galbeed Soomaaliya waxay iyagoo raali galinaya Xukuumada Gumaysiga Itoobiya, ka qabteen Magaalada Hargaysa Laba Ruux oo mid ka mid ah lagu magacaabo Kawsar Dakhare oo keensaday Magaalada Hargaysa Xoolo ay u iibkeensadeen. Maamulka Waqooyi galbeed ee ka amr qaata taliska Adis Abab ayaan la ogeeyn ilaa iyo hada meeshay geeyeen Dakharae iyo ninkii lala qabtay.
Ma, aha markii ugu horeeysay ee Maamulka Waqooyi Galbeed ka qabqabto Magaalada Hargaysa dad Shacab ah oo u dhashay Ogaadeenya si ay ugu gacan galiyaan Maamulka Adis Ababa ee ku Caanbaxay Xasuuqa iyo Xaqdarada Shucuubta uu gumaysto.
Dagaalo dhex maray Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya.
Wariyaha Radio Xoriyo ee jiida hore ee Ciidanka Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya Darwiish Dalmar, ayaa noo soo tabiyay Dagaalo ay is kaga hor yimaadeen Ciidamada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya oo ka dhacay Gobolo iyo Dagmooyin ka tirsan Ogadeenya.
Dagaalada ay Ciidamada Xorenta Ogaadenya ku qaadaan Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee Caadeeysta Daadinta Dhiiga Shacabka Ogaadeenya oo joogto ah, ayay kuwii ugu danbeeyay ka dhaceen goobahan soo socda.
03.02.2003 Dagaal ay ku qaadeen Ciidamada Geesiyiinta Xoreenta Ogaadeenya Ciideamada Doolka ah ee Gumaysiga Itoobiya ee ku sugan Magaalada Gunagado, waxay kaga dileen 4 Askari waxayna kaga dhaawaceen 6 Askari oo kale.
06.02.2003 Dagaal Gaadmo ah oo ay ku qaadeen Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya, Ciidamada Naflacaariga Gumaysiga Itoobiya oo marayay Xabaal Waayeel oo ku taala Duleedka Magaalda Qabridahare, waxay Ciidamada Dacdareeysan ee isukeenka Gumaysiga Itoobiya kaga dileen 3 Askari waxayna kaga dhaawaceen 7 Askari oo kale.
07.02.2003 Dagaal wada jir ah oo ay ku qaadeen is bahaysiga Ciidamada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Xoreenta Oramiya, Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee ka amar qaata taliska jaha wareersan ee Adis Ababa oo ku sugnaa Karin-Sool oo ka tirsan Gobolka Dhagax-Buur, waxay Ciidamada Xaqdarada iyo Xasuuqa ku caanbaxay ee Gumaysiga Itoobiya kaga dileen 8 Askari waxayna kaga dhaawaceen 15 Askari oo kale.
15.02.2003 Iska hor imaad Dagaal oo ku dhex maray Ciidamada Xaq u dirirka Xorenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Gari-Go,an, waxaa Ciidamada dacdaraysan ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 Askari oo kale.
Guud ahaan dagaaladan ayaa Ciidamada Cadawga Itoobiya aad loogu naafeeyay, waxayna kaliftay Burbur iyo Baxsi ku yimaada Ciidamada Itoobiya ee Xaqdarada iyo Cadaadiska Shuucubta lagu soo abaabulay.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in dhawaan shaqada laga fadhiisin doono kumanaan shaqaale ah oo ka tirsan maamulka magaalada Addis Ababa. Wararku waxay intaas ku darayaan in ilaa 14 kun oo shaqaale ah oo ka tirsan 40 Xafiis oo ay leeyihiin hay,adaha Dawlada ee kala gadisan Shaqaalahooda la dhimi doono. Warar aanu ka helay Dadka ku dhaw dhaw Xukuumada uu horjoogaha ka yahay Melis Zenawi ayaa noo sheegay in ay dhimista Shaqaalaha ka danbeeysay dhaqaalo daro ku timid xukuumada Itoobiya iyadoo loo waaya Mushahaarooyin shaqaalaha iyo Ciidamadaba.
Tilaabadan lagu dhimayo Shaqaalaha Xafiisyada ee ka howlgala Maamulada kala gadisan ee hayadaha Dawlada ayaa walwal ku abuurtay qoysas fara badan oo ay soo food saartay Shaqo la,aan.
Arday Oromo ah oo laga raafay Dugsiyadoodii si loogu daro Ciidamada Itoobiya.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Arsi ayaa sheegaya in Arday Oromo ah laga raafay dugsiyadoodii, si loogu daro Ciidanka gumeeysiga Itoobiya. Wararku waxay sheegayaan in Ardaydan laga raafay magaalada Arsi iyo magaalooyinka ay ka mid yihiin Seru, Adele iyo Sude, waxaana Ardaydaas loo qaaday xero uu Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ku leeyahay meesha lagu magacaabo Hurso, oo gobolka Oromiya ka tirsan.
Wararku waxay intaas ku darayaan in qaar ka mid ah Ardaydaasi oo diiday in la kaxeeyo lagu sameeyay jidhdil. Qaar kale oo Ardaydaas ka mid ahaa ayaa iyaga la sheegay inay nasiib u heleen inay ka baxsadaan ciidanka wayanaha, ka dib markii ay ka boodeen gawadhidii lagu waday.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee dalka Jabuuti mudane Cali Cabdi Faarax iyo Safiirka Mareykanka u fadhiya Jabuuti Danjire Donald Yamamoto ayaa 19 Bisha Feb.03 kala saxiixday heshiis ay dowladda Jabuuti ku oggolaanayso in Maraakiibta Ciidamada Badda ee Mareykanka ay isticmaalaan dekeda Jabuuti.
Dadka arrimaha gobolka indha-indheeya ayaa rumaysan in heshiiskan la kala saxiixday uu muujinayo heerka uu marayo xidhiidhka u dhexeeya dalalka Jabuuti iyo Mareykanka.
Sidaan la socono waxaa Jabuuti ku sugan ilaa 1200 oo Ciidamada Mareykanka ka mid ah oo u yimid howlo la xidhiidhra la dagaallanka argagixisada caalamiga ah. Heshiiskan ay kala saxiixeen Jabuuti iyo Mareykanku ayay wararku sheegayaan in uu ahaa mid lama filaan ah oo ay dowladda Itoobiya ka naxday iyadoo ay ugu muuqato haatan in Mareykanka caddaystay cida uu ku kalsoon yahay marka la eego gobolka Geeska Afrika.
Madaxwaynaha Eritrea oo u anbabaxay Wadanka Faransiiska.
Madaxweynaha Eritrea mudane Isayaas Afwerki ayaa u ambabaxay dalka Faransiiska, si uu uga qayb galo shirka dalalka Afka Faransiiska ku hadla oo ay ka soo qeyb galaan dalal badan oo Afrikaan ah oo qaarkood aanay Faransiiska ku hadlin.
Shirkan oo la mid ah shirka dalalka barwaaqo sooranka ee uu Ingriisku hogaamiyo ayaa ah mid lagaga hadlayo xaalada nabadgeyada Afrika iyo sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhaqaalaha qaarada Afrika.
Madaxwaynaha Efwerki ayaa la filayaa in uu kulamo gaara la yeelan doono Madaxwaynaha wadanka faransiiska iyo madaxwaynashaasha qaarada Afrika ee Shirka ka soo qaybgalay ku waas oo uu kala hadli doono xaalada siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo sidii nabad loogu heli lahaa Colaada ka aloogan.